24 Inches Khadadka Biyo -Bixinta ee Musqusha Musqusha Jikada Qubayska, Isku -xiraha Tubbada Tidcan Nylon Faucet Tubbada Feerka Dumarka
Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Fudeetada / 24 Inches Lines Sahayda Biyaha ee Musqusha Jikada Jilbadda Sink, Isku -xiraha Tubbada Tidcan Nylon Faucet Tubbo Feerka Dumarka
Cabbirka Heerka Maraykanka - G1/2, 9/16, 24 ”dherer ahaan, 0.43 ″ dhexroor isku xira, si fiican u xirxira si aad u hubiso tayada.
Tayada lagu kalsoonaan karo - Tuubada gudaha EPDM iyo tuubada nylon ee tidcan. Isku xiraha naxaasta adag, u isticmaal biyaha kulul iyo qabow labadaba, ku habboon musqusha iyo musqusha.
Ammaanka -Tucai biyo-gelinta tuubbooyin leh caymis caalami ah oo malaayiin doolar ah, oo aan lahayn Leedh (oo leh wax ka yar 0.25% macdanta rasaasta), cUPC by IMPAO, NSF 61 (Saamaynta Caafimaadka Biyaha ee Cabitaanka).
Way fududahay in la rakibo - 9/16 inch dun cadaadis dheddig x G1/2 isku xiraha dheddigga, fududahay in lagu rakibo gacanta ama furaha daqiiqado gudahood.
Dammaanad, Adeeg Macaamiil -Dammaanad 2 sano ah iyo taageero macmiil oo waqtigeedii la bixiyo. Waxaa daboola 90 maalmood oo soo noqosho xaddidan leh. Fadlan nagala soo xiriir amarkaaga, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan kuu caawino.
Tayo lagu kalsoonaan karo oo tidcan Nylon Supply tubbo
Dusha nylon ee tidcan, tuubada gudaha PX, naxaaska madaxa laba-madaxa, isku xira naxaas adag.
Tubada tidcan ee la naqshadeeyay waxay ka hortagtaa jeexitaanka iyo jabka.
Lowska naxaasku wuxuu ka hortagaa daxalka iyo daxalka dacwaynta isticmaalka nolosha.
Dhismaha waara wuxuu hubiyaa sanado waxqabad la isku haleyn karo.
Rakibaadda Fudud: Xiriiriyaha naxaas adag, si sahlan ayaa loogu dhejiyaa gacanta ama garaacis daqiiqaddii.
Dusha nylon ee tidcan, tuubada gudaha PX, naxaaska madaxa laba-madaxa, isku xira naxaas adag. Midhaha naxaasta ah si looga hortago daxalka iyo miridhku wayna fududahay in la nadiifiyo lana ilaaliyo.
G1/2, 9/16, 24-inji dherer ah, 0.43-Inch dhexroor isku xira.
Categories: Qalabka Fudeetada, accessories
11.3 x 7.72 x 1.38 inji
2-sano oo xaddidan oo xaddidan
Qaybaha Beddelashada Kusoo Bixida WOWOW pop up
WOWOW Xaashiyaha waraaqda Dahabka Dahabka ah ee WELOW Gold Mount
WOWOW Qalabka Qulqulka Qulqulka birta oo madoow oo ...